EX - ABSDF: ရင်နင့်စေခဲ့သော
ရဲရဲကြီး လုပ်လိုက်ပါ ပိုင်ထူး
ပြောပြရင် ယုံနိုင်စရာတောင် မရှိဘူးဗျာ။ မျက်စေ့ရှေ့မှာတင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်ခဲ့တာတောင်မှ စိတ်ထဲက မယုံချင်ဘူး။ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီလောက်အခြေအနေထိ ဖြစ်နိုင်မတဲ့လား။ မယုံနိုင်ဘူး။ မယုံချင်ဘူး။ မျက်စေ့အမြင်မှားတာသာ ဖြစ်လိုက်ပါတော့။
ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ တွဲလက်များအဖွဲ့ရယ်, အဖြူရောင်ဧရာဝတီအဖွဲ့ရယ်, မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရယ်ပေါင်းပြီး ကျောက်ကွဲကြီးကျေးရွာ မူလတန်း (ခွဲ) ကျောင်းလေးကို သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
လပွတ္တာမြို့ရဲ့အထက်ဘက် ကားလမ်းမအတိုင်း ၁၆ မိုင် ၄ ဖာလုံ သွားလိုက်တဲ့အခါ ကျောက်ကွဲကြီးကျေးရွာကို ဝင်ရမယ့် အဝင်ပေါက်ဆီ ရောက်ပြီ။ အဲဒီကမှ အတွင်းထဲကို ၁ မိုင်လောက် ဆက်ဝင်သွားပါမှ ရွာကလေးကို ရောက်တော့တာ။ ဆိုရရင် ကားလမ်းမရဲ့အတွင်းဘက်မှာ တသီးတခြား တည်ရှိနေတဲ့ရွာလေး။
မီးသတ်ဦးစီးမှူးက မောင်းပို့တဲ့ မီးသတ်ကားလေးနဲ့ ရွာလမ်းအတိုင်း ကျနော်တို့် ဝင်သွားကြတယ်ဆိုရင်ပဲ အိမ်ဝန်းကလေးတွေထဲက ရေပုံးလေးတွေ ဆွဲဆွဲပြီး ထွက်လာကြပါရော။
မီးသတ်ရေသယ်ယာဉ်နဲ့ သူတို့ရွာကို သောက်ရေလာလှူတယ်မှတ်ပြီး အားရဝမ်းသာ ထွက်လာကြရှာတာ။ လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကဆိုရင် ရေလိုချင်လို့ ကျောက်စည်ကြီးကိုထမ်းပြီး ကားနားထိ ရောက်လာကြတယ်။ ကျနော်တို့ ရေသွားလှူဖြစ်ဦးမှာပါ။
ဒီလိုနဲ့ ရွာလည်လောက်ကို ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ... တွေ့ပါပြီ ... ကျနော်တို့ မြင်ချင်တဲ့ စာသင်ကျောင်းလေး။
စာသင်ကျောင်းကလေးကို မြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက် ကျနော်တို့အားလုံး ရင်ထဲမှာ နင့်ကနဲ ခံစားလိုက်ရတာ ဘာစကားလုံးနဲ့မှ ပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
လယ်လုပ်ငန်းလေး မဖြစ်စလောက်နဲ့ တောင်ကြောတွေပေါ်မှာ ထင်းခုတ်, ဝါးခုတ်ပြီး အသက်မွေးရတဲ့ ရွာကလေးမို့ ပညာသင်အရွယ် ကလေးတွေအဖို့ နွမ်းပါးချို့တဲ့ရှာမှာပဲ ဆိုတဲ့အသိနဲ့ တတ်အားသမျှကူညီဖို့ ကျနော်တို့ သွားကြည့်ခဲ့ကြတာ။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ထင်ထားတာထက် အများကြီး ချို့တဲ့ကြပါတယ်။ စာသင်ကျောင်းကလေးက ၁၅ ပေပတ်လည်လောက်သာ ကျယ်တာလေ။ အဲဒီကျင်းကလုတ်လေးထဲမှာပဲ သူငယ်တန်း, ၁တန်း, ၂တန်း, ၃တန်း, ၄တန်း အကုန်လုံးကို ပြွတ်သိပ်ထိုးထည့်ပြီး ဆရာမလေး ၁ ယောက်တည်းနဲ့ စာသင်ရတယ်။ ပညာရေးဌာနက သင်ကြားမယ့်ဆရာ ချမပေးလို့ ရွာကစုပြီး ငှါးထားရတဲ့ ဆရာမလေးပေါ့။
၁၅ ပေ ပတ်လည်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းဆောင်လေးကလည်း ဝါးနဲ့ဆောက်ထားပြီး ယိုင်နဲ့နဲ့ရယ်။ ဓနိမိုးပြီး စလူဖက်ကာထားတာပေါ့။ ဓနိအမိုးတွေ ပေါက်ပြဲပီး အကာတွေကလည်း ကျိုးပဲ့နေတဲ့ အဲဒီကျောင်းဆောင်လေးမျိုး ကျနော်တို့တစ်သက် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့ဘူး။ ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကြရင်းမှာပဲ *ပညာရေးဖြင့် ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်အံ့* ဆိုတာကို သတိရမိသေး။
လာမယ့်စာသင်နှစ်မှာတော့ ကျောင်းအဆောက်အဦးကို ရွာရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ ပြန်ဆောက်ကြမယ်လို့ ရွာလူကြီးက ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့ အားလုံးကလည်း ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်နိုင်ရေးကို တတ်အားသမျှ ကူညီလှူဒါန်းပေးဖို့နဲ့ တစ်နှစ်တာ သင်ကြားရေးကုန်ကျစရိတ်များကို တာဝန်ယူပေးကြမယ်လို့ တိုင်ပင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
၂၂. ၄. ၂၀၁၅